तन्नेरी अधिकृतहरूका सफलताको कथा - Everest Talk
तन्नेरी अधिकृतहरूका सफलताको कथा1 min read
२०७६, ११ पुष शुक्रबार २२:३५
कुनै एक समयमा सरकारी जागिरको सपना नसजाउने सायदै भेटिएलान । दशैँमा टीका लाउन जाँदा ‘अधिकृत भएस्’ भनेर आर्शिवाद पनि धेरैको शिरमा चढेको होला । र, परिवारबाट पनि सरकारी जागिरको कर हामीमध्ये धेरैलाई आएकै होला ।
सरकारी जागिर भन्नु भनेको नेपाली समाजमा प्रतिष्ठाको पर्यायवाची शब्द हो । इज्जत हो । सरकारी जागिर भविष्यको सुरक्षा पनि हो । र, देश र देशवासीको सेवा सहज तरिकाले गर्न सकिने एउटा ओहोदा पनि हो । जेहोस्, सरकारी जागिर धेरैको सपना हो ।
अधिकृतहरूलाई हेर्ने हाम्रो नजर झन बेग्लै छ । अधिकृत भन्नु एक समाजको मात्र हैन कि राष्ट्रको पनि विशिष्ठ ओहोदा हो । अधिकृत भन्नेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा आधी उमेर गएको वा अधवैँशे चेहेरा आँखाअगाडि आइदिन्छ । तर आज यस स्तम्भले तपाईँको त्यो नजरियालाई भत्काइदिनेछ । यहाँ यस्ता अधिकृतको बारेमा कुरा गरिनेछ जो तपाईँको मस्तिष्कमा चित्रित अधिकृतभन्दा बिलकुल फरक छन् । तन्नेरी छन् ।
इलामस्थित गोधक स्थायी घर भएका यादव राउत इलामकै मंगलबारेस्थित मालपोत कार्यलयमा अधिकृत छन् । बाइक राइडिङ यादवको शोख हो भने उनी आर्ट अफ लिभिङका प्रशिक्षक पनि हुन् ।
नायवसुब्बाबाट सरकारी जागिरको यात्रा सुरु गरेका यादब २७ वर्षको उमेरमा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए । उनले नासुको रिटन परीक्षामा पहिलोपटक नै एकै पटक पाँच विभागमा नाम निकालेका थिए भने अधिकृतको यात्रा भने उत्ति सहज भएन । पहिलोपटक यादवलाई अधिकृत बन्न खै केले हो ? रोक्यो । उनी दोस्रो राउण्डमा फालिए । दोस्रो प्रयासमा भने उनी आफूलाई गोरखापत्रमा छापिएको लिस्टमा अटाउन सफल भए । अधिकृतमा आफ्नो नाम निक्लिएको खबर सुन्दाको अनुभूति स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘‘परीक्षामा आफ्नोतर्फबाट दिने बेस्ट नै दिएको थिएँ तर पनि नाम निक्लन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भने थिइनँ । आश त कसलाई पो हुन्न र ? जब आफ्नो नाम लिस्टमा अटाएको थाहा पाएँ, भित्रभित्रै ‘वाउ ..’ लागेको थियो । आफूलाई धन्य मानेको थिएँ ।’’
२९ वर्षिय यादवलाई आफू सरकारी जागिरे हुन्छु भन्ने कहिल्यै थिएन । उनी त बाइक स्टनका सोखिन थिए । स्टन राइडर बन्न चाहान्थे । तर उनको जीवनमा केही श्रृखलाहरू यस्ता बनेकी उनी लोकसेवा तयारीमा लागिपरे ।
उनले आमालाई च्यालेन्ज गरेका थिए रे, ‘एक वर्षभित्र सरकारी जागिरमा नाम निकाल्छु’ भनेर । तर उनले यो कुरालाई कुनै विशेषरूपमा लिएका थिएनन् । उनलाई त बाइक स्टनकै शोख थियो । स्टन राइडर बन्नु थियो । तर विस्तारै उनलाई स्टन जोखिकयुक्त लाग्न थाल्यो । उनी कुनै सेफ्टी गियरहरूको प्रयोग पनि गर्दै थिए । ठीक्क त्यहीबेला उनले सञ्चालन गर्दै आएको मोबाइल पसलमा पनि आगो लाग्यो । जसले गर्दा उनी लोकसेवाको तयारीतर्फ उन्मुख भए ।
लोकसेवाको तयारी गर्दाताको उनको कोठाको हुलिया अझै पनि उनको मानसपटलमा ताजै छ । कोठाको भित्ताभरि पेपरहरू टाँस्थे रे उनी, जसमा लोकसेवाले सोध्नसक्ने प्रश्नहरू नाचिरहन्थे । लोकसेवा तयारीको बेला उनको तकिया पनि किताब बन्थे । कोठामा जता हेरे पनि पहिलो नजरमा किताब नै आउँथ्यो रे ।
आफ्नो लोकसेवा तयारीको अनुभूतिलाई समेट्दै उनी भन्छन्, ‘‘लोकसेवा तयारी गर्नेहरू ले तनावमुक्त भएर पढ्नुपर्छ । पास हुनको लागि हैन कि जान्न र बुझ््नको लागि पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । पढाइमा मन लगाउनका लागि योग तथा ध्यानको पनि आवश्यकता पर्दछ । यदि कोही कोठाबाट निक्लेपछि, ‘आज मैले यति ओटा मिलाउनुपर्छ‘’ भन्दै सोच्छ, ऊ बाटोमै फेल भइसकेको हुन्छ । त्यो परीक्षासँगको डर हो । परीक्षासँग डराउने बानीलाई हराउन सक्नुपर्छ ।’’
यादवका अनुसार युवाहरूको आइटी सेक्टरमा पहुँच राम्रो छ । सेवाग्राहीहरूलाई सरकारी कामकाजको बारेमा जानकारी कम्ति छ । यदि अहिलेका युवा सरकारी जागिरहरूले सोसल मिडियाको प्रचुरमात्रा प्रयोग गर्दै जनताको ठाउँसम्म पुग्न सक्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।
इलाम सदरमुकाम इलाम नगरपालिका आठ स्थायी बसोबास भएकी रोश्ना देवान हाल गृहमन्त्रालयमा अधिकृत छिन् । पच्चीस वर्षमा हुँदा अधिकृत भएकी रोश्नाले २१ वर्षमा हुँदा नै नासुमा आफ्नो नाम दर्ज गराइसकेकी थिइन् । अधिकृत भएर उनले अहिले दोस्रो वर्ष मनाइरहेकी छिन् ।
रोश्नालाई सरकारी जागिरप्रति न कुनै चासो थियो न त कुनै रुचि नै । परिवारको संरचना भने सरकारी जागिरको नजिक थियो । बुवा, काका, दिदी, भिनाजुलगायत आफ्ना नजिकका मनहरू सरकारी जागिरमा आवद्ध रहेकाले पनि उनी आपसेआफ सरकारी जागिरतिर तानिइन् ।
रोश्ना बिबिए सातौँ सेमिस्टारमा पढ्दैगर्दा नासुको परीक्षा उसै परिक्षणका लागि दिइन । त्यही वर्ष उनको नाम नासुको लिस्टमा दर्ज भयो । अब नासु भएसी अधिकृत किन नहुने भनेर उनी प्रयासमा लागिन् । उनको रट्ने बानी थिएन । न कुनै फमुर्ला बनाएरै पढ्ने गर्थिन् । फेरि उनको नासुको जागिर अदालतमा थियो । प्रायः साँझ छ बजेसम्म अफिसमै । कहिलेकाहीँ त शनिबार पनि अफिस नै । पढ्ने समय खासै थिएन । त्यही समयकै अभावमा पनि उनले अधिकृतको परीक्षा लेख्दी भइन् । आखिर तेस्रो पटकमा नाम निकालेरै छोडिन् ।
अधिकृतमा आफ्नो नाम निक्लिएको खबर पहिलो पटक सुन्दाको अनुभूति साझा बनाउँदै भन्छिन्, ‘‘अदालत घटस्थापनाबाट बिदा भएको थियो, म घर पुगिसकेकी थिएँ । किचनमा काम गदैथिएँ, मभन्दा केही ब्याजअघिकी साथीले फोन गरेर अधिकृतको पहिलो पेपरमा नाम निक्लिएँको थाहा पाएँ । सुखी लाग्यो । दशैँभन्दा । रमाइलो लाग्दो । तर, टीकाको भोलिपल्टै काठमाडौँ फर्कनुपर्याे ।’’
अधिकृतको पहिलो पेपरमा नाम निस्किसकेपछि भने उनलाई आउँदो तयारी गर्न समय अपुग हुनेभयो । उनले एक महिनाको बिदा लिएर बाँकी तीन पेपरको तयारी गरिन । जसमा उनलाई सफलता पनि मिल्यो ।
रोश्नीका अनुसार, मान्छेअनुसार उसको दिमाग फरक हुन्छ । सबैको लागि यत्ति नै पढ्ने भन्ने पनि नहोला । तर यत्ति चाहिँ हो कि सबै पेपरलाई बराबर समय भने दिनुपर्छ । सजिलो र गाह्रो भनेर समय भाग लगाउनुचाहिँ हुन्न । पढ्ने भनेरै धुम्धुम्तिी बस्नु पनि पर्दैन । तर पढेको समयमा चाहिँ दिल लगाएर पढ्नुपर्छ । अहिलेको जेनेरेसनका लागि पहिलो पेपर समस्या हैन, समस्या दोस्रो पेपर हो । जसमा कानुनीदेखि लिएर प्रसासनिक कुराहरू पढ्नुपर्छ ।
‘‘गृहमन्त्रालयले ७७ जिल्लाका सबै प्रशासनिक कार्यलयहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । कतिपय कामहरू आजको आजै गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा फ्याक्स तथा इमेलको प्रयोगले सहज बनाएको छ ।’’ उनी भन्छिन्, ‘‘के पनि हुँदो रहेछ भने, पुराना अधिकृतहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरको कामका लागि कम्प्युटर अपरेटरको आवश्यकता हुन्थ्यो । तर, अहिलेको हाम्रो जेनेरेशनलाई भने त्यो कम्प्युटरको ज्ञान छ । अपरेटर आवश्यक पर्दैन ।’’
रेसुङगा नगरपालिका ७ गुल्मी स्थायी बसोबास भएका सुरजकुमार चुदारा हाल प्रदेश तहमा समायोजन भई सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तगर्त शिक्षा विकास निर्देशनालय वुटवलमा अधिकृतको पदमा कार्यरत छन् ।
चुदारालाई सरकारी जागिरेको सामाजिक प्रतिष्ठा र पेन्सन प्रणाली गर्दा हुने सुरक्षित भविष्यका कारण पनि यस क्षेत्रप्रति मोह जाग्यो । फेरि निजामती सेवालाइ स्थायी सरकारको रूपमा समेत लिने भएकोले जनतासगँ नजिक रहेर काम गर्न पाउने अवसर चुदाराका लागि लोभलाग्दो थियो । उनको परिवारमै पनि आफूभन्दा ठूला दाइदिदीहरू सरकारी क्षेत्रमा रहेका हुनाले समेत उनमा सरकारी जागिरप्रति प्रेम रहेको थियो ।
२०७० सालमा नायवसुव्वा पदमा आफ्नो नामलाई अटाउन सफल भएका सुरजको पहिलो पोष्टिङ सर्वोच्च अदालतमा भएको थियो । त्यसपछि नासुको जिम्मेवारीमा रहँदै उनले अधिकृतको तयारीमा लागे । पहिलो पटक विफल बने । दोस्रो पटकमा भने उनले (२०७२ साल) अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत शाखा अधिकृत पदमा आफ्नो नाम सूचीकृत गराए । त्यसपछि महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्तगर्त नियुक्ती लिए । जति बेला उनको उमेर २५ वर्षको थियो ।
सुरज हरेक कुरालाई पहिले कापीमा लेख्थे, सँगसँगै पढ्थे पनि र पढेको कुरालाइ दिनहु दोर्याउँथे । हिजो पढेको कुरा आज पुनः एक पटक पढ्ने गर्दथे । विषेश गरी उनी तीनवटै पत्रलाइ निश्चित् समय छुट्याउँथे । दिउँसो कार्यालय जानु पर्ने बाध्यता त थियो नै तर त्यसका बाबजुद पनि उनी प्रत्येक पत्रलाई दिनको एकदेखि डेड घण्टाको समय छुट्याउँथे । विशेषत विहानको समयमा लिखित पेपर पढ्ने गर्थे भने साँझ र राती आइक्यु र जिके लेख्दै पढ्ने काम गर्दथे । त्यो समयमा उनको कोठामा लोकसेवाका उत्तर लेखेका कापी तथा पुस्तकहरू को थाकथाक रहन्थे ।
अधिकृतमा नाम निक्लेको खबर सुन्दाको अनुभूति ताजा गराउँदै उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको राजपत्राङकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदमा नाम निस्केको सुन्दा एकदमै खुसी लागेको थियो । मेरो कार्यालयदेखि हामी नासुको व्याजी २ जनाका साथै ५ जना को नाम निस्किदा कार्यालयभरि नै चर्चा चलेको थियो । जुन चर्चा सुन्दा झन रमाइलो लागेको थियो ।’’
सुरजकुमारका अनुसार, विशेषगरि लोक सेवा गाह्रो हुन्छ भन्ने भनाइले गर्दा हामीहरू प्रतिस्पर्धा नै गर्दैनौँ । तर जब प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छौँ, तबमात्र आफ्नो क्षमता तथा लगनशीलता हामी थाहा पाउँछौँ । यदि अन्य कुरा केही नसोची, लोकसेवा दिने परिक्षार्थीको संख्यालाइ वास्ता नगरी, मलाई चाहिएको १ पद हो म यसैको लागि तयारी गर्छु भन्ने सोच्न सके लोकसेवा गाह्रो हुँदैन । प्रतिस्पर्धा अरूसँग नभएर आफैँसँग गर्नुपर्ने हुन्छ । अनी अर्को कुरा सामान्य ज्ञान पढ्दाचाहिँ दोहार्याई तेहेर्याई दैनिक रुपमा प्रश्न संख्या बढाउदै लैजानुपर्छ नकि एकै दिनमा सबै पढ्छु भनेर हँुदैन । र लिखित पेपर सकेसम्म लेखेर पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्दछ । साथै प्रश्नको उत्तर दिँदा आफुले जानेको नभै प्रश्नले खोजेको उत्तर लेख्नुपर्छ । उत्तर लेख्दा समयलाइ ध्यान उत्तिकै दिनुपर्छ ।
Tags: अधिकृतसफलताको कथा